बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने काम मुख्यतः “माधव नेपाल नेतृत्व”को सरकारले गरेको रहेछ::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विष्णु पौडेलका अनन्य भक्तलाई पनि थाहा छ, ५० हजार रुपियाँ आनामा बालुवाटारमा जग्गा स्वच्छ मान्छेले किन्नु सम्भव थिएन ।
अख्तियारको अध्ययन र निष्कर्ष आफैमा पूर्ण र न्यायमूलक छ भन्ने छैन । एक त प्रधानमन्त्रीलाई जतिभ्रष्टाचार गर्न पनि छुट छ भन्ने अत्यन्तै घा’तक र गलत नजीर बसाउन खोजिएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिनेछ । भोलि मन्त्रिपरिषदले कुनै एउटा जिल्ला, नदी या पहाड़ बेच्ने निर्णय गऱ्यो भने पनि खरदारदेखि सचिबसम्मलाई समाउने तर प्रधानमन्त्रीलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने देखियो । दोस्रो, सूक्ष्म अध्ययन र मिहिनेतबिनै सबैलाई मुद्दा चलाएको त होइन भन्ने पनि देखिन्छ ।
भनिन्छ, ९ करोड़ बिगो मागिएका पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग एउटा गतिलो मोटरसाइकिल किन्ने हैसियत पनि छैन । उनी फस्ने तर उनको मन्त्रिपरिषद-प्रमुखले इम्युनिटी पाउने भन्ने कुरो अचम्मको देखिन्छ । प्रत्यक्ष लाभग्राही देखिएका, हिजो सुकुम्बासी बनेर राज्यबाट सुविधासमेत पड्काएका र आज मन्त्री र सांसदको तलबभन्दा धेरै गुना सम्पत्ति भएका पौडेलले छुट पाउने र अहिले पनि निम्न वर्गीय जीवनशैली भएका जोशीहरू फ़स्ने घटना धेरैलाई आश्चर्यजनक लागेको छ । यसको अर्थ जोशी निर्दोष र पौडेल दोषी नै हुन् भन्ने होइन ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेजति सबै भ्र’ष्ट र मुद्दा नचलाएका जति सबै स्वच्छ भन्ने हुँदैन । यो तथ्यापन गर्ने काम अदालतको हो । धेरै भ्रष्टहरू छुटेका हुन सक्छन् र अहिले मुद्दा खेप्नु परेका धेरै निर्दोष हुन सक्छन् । तर अब यो हाम्रो होइन, अदालतको जिम्मा हो । अख्तियारले दुई मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई भ्रष्टाचारको एपिसेन्टर मानेको छ । विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र दिनेश अधिकारीहरू त्यही निर्णयका आधारमा मुद्दा खेप्दै छन् । यदि विजय गच्छदार सही छन् भन्ने कांग्रेसी मत हो भने त अख्तियारले देखाएका ११० जनामध्ये कोही पनि दोषी नहुने भए । अब कुशको दोषी खोजेर मुद्दा चलाउने कुरो त भएन ।
हुन सक्छ, त्यो निर्णय आफैमा गलत उद्देश्यले भएको नहोस् र अन्य बिचौलियाले त्यसको अनुचित फाइदा उठाएका हुन् । यसअघि विष्णु पौडेलजीकै पहलमा माधव नेपालजीले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा मगाएको भन्ने पढिएको थियो । जग्गा भोगचलनमा संलग्न नरहेका तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जोड़िएका कतिपय सचिब र कर्मचारी पनि परिबन्दले फसेका हुन सक्छन् । यसर्थ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ‘भ्र’ष्ट’ नै हुन् भन्ने छैन । तर देशको संवैधानिक निकायले तिनलाई दोषी देखाएपछि यो विषयमा न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म दुबैले सरकारी पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु र आफूले गरेका निर्णय सही थिए भन्ने साबित गर्नु दुबैको नैतिक दायित्व हुनुपर्ने हो ।
भ्र’ष्टा’चार देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । बालुवाटार मात्रै देशको भ्रष्टाचार भन्ने होइन । यस्ता हजारौं टारहरू छन् । यो एउटा सुरुवात भने हुनसक्छ । आमजनताबाट वाहवाही बटुल्न सक्ने अवस्थालाई सरकार आफैले केही व्यक्तिकोपछि लागेर उल्टो छवि धमिल्याउने काम राम्रो होइन । यो चुनौतीपूर्ण र अप्ठेरो अवस्था पक्कै हो, तर सरकार र पार्टीका लागि यो एउटा अवसर पनि हो !
अरबौंको कमिसनको डिलमा हेर्दा गोकुल देखिए पनि यसको पछाडि बालुवाटार नै पो रहेछ !
महरा र बिष्णु लाई जोगाएको नेकपाले बाँस्कोटालाई कसो नछोप्ला
छिमेकी मित्र देशको बेईज्जत गर्ने अधिकार कसले दियो ?